DIY: ifowuni eneiglasi zeyogathi | Imisebenzi yezandla
Los iikomityi zeyogathi zizinto kakhulu iluncedo kwaye iluncedo kubugcisa, ngakumbi abantwana. Zizinto ezinokusebenziseka lula apho sinokwenza ubugcisa obungenasiphelo kunye neendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa nezokudlala zabantwana.
Ngobu bugcisa sifundisa abantwana ukuba benze khuthaza izakhono zabo zemoto, kunye nokukhuthaza ukuba zisetyenziswe kwakhona. Ngale ndlela, baya kuba nolwazi ngakumbi xa kuziwa ekunyamekeleni umhlaba.
Iikomityi ezi-2 zeyogathi.
Iphepha leethishu elinombala.
Okokuqala, siya kuhlamba i iikomityi zeyogathi kwaye siza kuyikhupha. Emva kwexesha, siza kuyigubungela ngokuncamathelisa iphepha leethishu elinemibala eyahlukeneyo. Emva koko, siza kwenza umngxunya omncinci emazantsi eglasi kwaye sizokwazisa ngentambo ebhityileyo, esiya kuyenza iqhina elomeleleyo ukuze ingaphephi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » I-DIY: ifowuni eneekomityi zeyogathi